သူမကိုယ်တိုင် ကိုဗစ်ဖြစ်နေပေမယ့် အောက်စီဂျင်ပြတ်သွားရင်မဖြစ်တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကို စိုးရိမ်နေရကြောင်းပြောပြလာတဲ့ မေပန်းချီ – Cele Posts
သူမကိုယ်တိုင် ကိုဗစ်ဖြစ်နေပေမယ့် အောက်စီဂျင်ပြတ်သွားရင်မဖြစ်တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကို စိုးရိမ်နေရကြောင်းပြောပြလာတဲ့ မေပန်းချီ
သရုပ်ဆောင်မေပန်းချီကတော့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပီပြင်လှတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ပရိတ်သတ်ကြီးတွေရဲ့အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မင်းသမီးပဲဖြစ် ပါတယ်မေပန်းချီကတော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲ ပြည်သူတွေနဲ့အတူပါဝင်ပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်၊အလှူအတန်းရက်ရောတဲ့မေပန်းချီကမကြာခဏဆိုသလိုအလှူအတန်းတွေပြုလုပ်လေ့ရှိ ပါသေးတယ်။
ယခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့နေရာတော်တော် များများတွေမှာကူးစက်နှုန်းပိုမိုပျ့နှံ့နေပြီးတော့ အသေအပျောက်လဲများနေခဲ့ပါတယ်၊လက်ရှိ လိုအပ်နေတဲ့ အောက်ဆီဂျင်မရရှိခြင်းကြောင့်အသက်မဆုံးရှုံးသင့်ပဲ ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီကိုယ်တိုင်လဲ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရပြီး သူမကတော့ သူမရဲ့အမေအတွက်ပဲ စိတ်ပူပန်နေရပါတယ်လို့ ရင်ဖွင့်ပြောပြထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် မေပန်းချီက သူမရဲ့မိခင်ကြီးကအောက်ဆီဂျင် အမြန်လိုအပ်နေကြောင်းကိုသူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာ ရေးသားဖော်ပြလာပါတယ်။မေပန်းချီက အောက်ဆီဂျင်မှမရရင် အမေသေရပါတော့မယ်ဆိုပြီးသူမရဲ့ ခံစားချက်တွေကိုအခုလို စာသားလေးနဲ့ပြောပြလာပါတယ် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ မေပန်းချီရဲ့အမေအမြန်ဆုံးသက်သာပျောက်ကင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါဦးနော်…….
သူမကိုယျတိုငျ ကိုဗဈဖွဈနပေမေယျ့ အောကျစီဂငျြပွတျသှားရငျမဖွဈတဲ့ မိခငျဖွဈသူကို စိုးရိမျနရေကွောငျးပွောပွလာတဲ့ မပေနျးခြီ
သရုပျဆောငျမပေနျးခြီကတော့ အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျနဲ့ပီပွငျလှတဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှကွေောငျ့ ပရိတျသတျကွီးတှရေဲ့အားပေးမှုကို အခိုငျအမာရရှိထားတဲ့မငျးသမီးပဲဖွဈ ပါတယျမပေနျးခြီကတျောလှနျရေးကွီးမှာလဲ ပွညျသူတှနေဲ့အတူပါဝငျပွီး လူထုလှုပျရှားမှုတှမှောလဲပါဝငျခဲ့ပါတယျ၊အလှူအတနျးရကျရောတဲ့မပေနျးခြီကမကွာခဏဆိုသလိုအလှူအတနျးတှပွေုလုပျလရှေိ့ ပါသေးတယျ။
ယခုလကျရှိမွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ကိုဗဈရောဂါကပျဆိုးကွီးနဲ့ ပတျသတျပွီးတော့နရောတျောတျော မြားမြားတှမှောကူးစကျနှုနျးပိုမိုပြ့နှံ့နပွေီးတော့ အသအေပြောကျလဲမြားနခေဲ့ပါတယျ၊လကျရှိ လိုအပျနတေဲ့ အောကျဆီဂငျြမရရှိခွငျးကွောငျ့အသကျမဆုံးရှုံးသငျ့ပဲ ဆုံးရှုံးနရေပါတယျ။သရုပျဆောငျ မပေနျးခြီကိုယျတိုငျလဲ ကိုဗဈကူးစကျခံထားရပွီး သူမကတော့ သူမရဲ့အမအေတှကျပဲ စိတျပူပနျနရေပါတယျလို့ ရငျဖှငျ့ပွောပွထားပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မပေနျးခြီက သူမရဲ့မိခငျကွီးကအောကျဆီဂငျြ အမွနျလိုအပျနကွေောငျးကိုသူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျထကျမှာ ရေးသားဖျောပွလာပါတယျ။မပေနျးခြီက အောကျဆီဂငျြမှမရရငျ အမသေရေပါတော့မယျဆိုပွီးသူမရဲ့ ခံစားခကျြတှကေိုအခုလို စာသားလေးနဲ့ပွောပွလာပါတယျ ဝငျရောကျဖတျရှုပေးတဲ့ပရိတျသတျကွီးလဲ မပေနျးခြီရဲ့အမအေမွနျဆုံးသကျသာပြောကျကငျးပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးခဲ့ပါဦးနျော…….
ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတာကြောင့် အရမ်းခံစားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို ပရိသတ်ကြီး သိအောင်ပြောပြလိုက်တဲ့ မေမီကိုကို
ကံကောင်းစွာနဲ့ အသက်ဘေးမှသီသီလေး လွတ်မြောက်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို ပြန်လည်ပြောပြလိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင်